खोप निर्माणको पछिल्लो अवस्था यस्तो छ : डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ « Post Khabar
खोप निर्माणको पछिल्लो अवस्था यस्तो छ : डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ
Published on: 11 November, 2020 9:28 am
अमेरिका र जर्मनीको संयुक्त प्रयासमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माण गरिरहेको फाइजर र बायोंटेक कम्पनीले विश्वका ६ देशका ५३ हजार ५०० मा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्र्याल गरेको थियो । यो परिक्षणमा ९० % सफलता हासिल गरेपछि अमेरिकी र जर्मनी बैज्ञानिक निकै उत्साहित बनेका छन् ।
अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, साउथ अफ्रिका र टर्कीमा ४३,५०० जनामा ३ हप्ताको अन्तरमा यो खोपको २ डोज लगाइएको थियो | दोस्रो खोप लगाएको ७ दिनपछि कोरोना भाइरसविरुद्धको एन्टिबोडी देखिएको बिबिसीले जनाएको छ । सुरुमा खोप लगाएका ९४ जना व्यक्तिको अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो । सबै तथ्यांकको विश्लेषण बाँकी रहेकोले यो फाइनल रिपोर्ट नभएको फाइजर र बायोंटेकका अधिकारीले बताएका छन् । सबै रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि खोपलाई आबश्यक परिमार्जन गरिने जानकारी दिइएको छ । कम्पनीले डिसेम्बरसम्म आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति पाउने आशा गरेको छ ।
फाइजर तथा बायोंटेकले नोभेम्बेरको तेस्रो हप्तासम्म नियामक निकायमा तथ्यांक पेश गर्नेछन । त्यहांबाट प्रमाणित भएपछि मात्र खोपको अभियान सुरु हुन्छ । सुरुमा खोप सानो जनसंख्याको लागि बिभिन्न देशमा पठाइनेछ । त्यो खोप जेष्ठ नागरिक, दीर्घबिरामी, बालबालिका, सुत्केरी, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलाई दिइनेछ । ठूलो संख्यामा उत्पादन भएपछि मास भ्याक्सिनेसन गरिनेछ ।
यो खोपले कति लामो समयसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा खोप लगाएपछि थाहा हुनेछ । यसले केहि महिना काम गर्न पनि सक्छ, एक बर्ष काम गर्न पनि सक्छ तथा लामो समय काम गर्न पनि सक्छ । यी कम्पनीले घटीमा एक बर्ष खोपले काम गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । यसको ठूलो मात्रामा उत्पादन, भण्डारण र परिवहनमा केहि कठिनाइ देखिएको छ ।
यो खोपलाई माइनस ८० डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कीर्ते नागरिकता : वडाध्यक्ष सहित ५ जनालाई पक्राउपूर्जी जारी , दुई पक्राउ